I-China Abenzi Bezikhwama ze-PE ezenziwe ngokwezifiso ze-PE, Abahlinzeki, Ifektri - Ikhotheshini - UKULAWULWA KWE-MIMO FLOW
Ikhaya > Isikhwama sepulasitiki Isikhwama sepulasitiki > Isikhwama sepulasitiki se-PE
izesekeli zengubo yengelosi co., LTD. Ingabe inkampani onguchwepheshe ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukene PE, PP, OPP isikhwama nesikhwama ngesandla, isikhwama zonke izinhlobo zezimboni futhi commercial emaphaketheni izikhwama nazo zonke izinhlobo impahla fashion izikhwama, izikhwama zezimonyo, non-ephothiwe isikhwama, enamathela isikhwama, isikhwama sokuthenga semvelo nazo zonke izinhlobo zebhizinisi lemikhiqizo yokupakisha yebhamuza,
1.product isingenisoIsikhwama sepulasitiki se-PE:
izesekeli zengubo yengelosi co., LTD. Ingabe inkampani onguchwepheshe ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukene PE, PP, OPP isikhwama nesikhwama ngesandla, isikhwama zonke izinhlobo zezimboni futhi commercial emaphaketheni izikhwama nazo zonke izinhlobo impahla fashion izikhwama, izikhwama zezimonyo, non-ephothiwe isikhwama, enamathela isikhwama, isikhwama sokuthenga imvelo kanye nazo zonke izinhlobo zebhizinisi lemikhiqizo yokupakisha, imikhiqizo esetshenziswa kakhulu esitolo somnyango wesitolo, ukudla, ukunakekelwa kwezempilo, izinto zokuwasha izimonyo, iphepha lasendlini yangasese, izindwangu zokugqoka, imikhiqizo yasendlini, i-elekthronikhi, ezokuxhumana ngocingo, amathoyizi, izipho, ipulasitiki, izinsimbi nezinye izimboni.Yonke imikhiqizo yenkampani isidlulile izivivinyo zokuvikela imvelo ezingezona ezinobuthi noma eziphansi eYurophu, e-United States naseJapane.
2. Amapharamitha womkhiqizo weIsikhwama sepulasitiki se-PE:
290mm * 205mm (ngokwezifiso usayizi)
Uhlangothi olulodwa u-0.09 mm (ubukhulu obenziwe ngezifiso)
CPE / Laminated noma njengenkambiso yakho
Ukuphrinta kwe-Gravure (kuze kube yimibala engu-9, ukuphrinta okwenziwe ngokwezifiso)
Eco-friendly futhi Ukudla-grade
Isetshenziswe kakhulu ekupakisheni isipho, izimonyo, isitoreji, izindwangu, izingubo njll
I-SGS / ISO / QS
Isampula yamahhala, udinga nje ukukhokha imithwalo.
Thumela okufakiwe okujwayelekile
ukuthunyelwa, ukuthuthwa komoya, ukuvezwa kwamanye amazwe njll
3. Imiyalo yokusebenzisa umkhiqizo weIsikhwama sepulasitiki se-PE:
Izinzuzo zeIsikhwama sepulasitiki se-PE:ukukhanya nokusobala, ukufakazela umswakama, ukumelana nomoya-mpilo, ukumelana ne-asidi, ukumelana ne-alkali, ukuqina komoya jikelele, ukubekwa uphawu kokushisa okuhle kakhulu nezinye izinto.
5. Imibuzo evame ukubuzwa
I-MOQ ingu-100pcs. Uma i-oda lakho lingaphansi kwama-100pcs, izindleko zizofana.
asikwazi ukunikeza inani elithile kakhulu kuze kuqinisekiswe konke ukutholakala komkhiqizo njengokuqukethwe, ubukhulu, ubuchwepheshe nobungako. Ngakho-ke sicela uthintane nokuthengisa kwethu ngaphambi kokufaka i-oda.
3. ISAMPULA oda
Custom logo isampula odais wamukelekile. Kubiza cishe ama-40usd, kuya ngobuchwepheshe obuhlukile nezinto ezibonakalayo.
Singathumela isikhwama sethu se-freestock ukuthola ireferensi yakho (ungabheka umphumela wokuphrinta kanye ne-bagquality), Ngale ndlela, udinga nje ukukhokhela imali yokulethwa.
4. UMSEBENZI WOKUSEBENZA
Uma ufaka i-oda, sicela uthumele ubuciko ku-AI noma kufayela le-PDF ekuthengiseni kwethu. Ukubambezeleka ekuthumeleni ubuciko bokwenza ukubambezeleka kokulethwa. Kwezinye izimo, singanikeza ubuciko mahhala (ngemuva kokukhokhwa kwe-oda lokukhokhelwa) ngomklamo olula. Ifektri izoqhubeka nokukhiqizwa kwenqwaba ngokususelwa kubuciko bokugcina obukuqinisekisile.
Isikhathi esivamile sokuhola sokukhiqiza yizinsuku zokusebenza ezi-9-10. Isikhathi sokulethwa simayelana nezinsuku zokusebenza ezi-5-7.
Isikhwama sepulasitiki se-PPE
Isikhwama OPP self ingcina
Isikhwama sepulasitiki se-PP